अचाक्ली बढयो तरकारीको भाउ, बिचौलियाको बिगबिगी « News24 : Premium News Channel
अचाक्ली बढयो तरकारीको भाउ, बिचौलियाको बिगबिगी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा साविक हाराहारी नै भित्रदा पनि तरकारी र फलफूलको भाउ अचाक्ली बढेको छ । जसकारण भान्छा महंगिदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । एक साता बीचमा तरकारीको मूल्य ९३ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
खुद्रा बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ नाघेको छ । जवकी एक साता अघि अधिकांश तरकारीको मूल्य ६५ देखि ७५ रुपैयाँ बीचमा थियो । बाढी–पहिरोलाई बहाना बनाएर बिचौलियाले मौका छोप्दा र सरकारले अनुगमनमा ध्यान नदिँदा उपभोक्तको ढाड सेकिएको हो ।
कुन तरकारीको मूल्य कति ?
बर्खाको बेला तरकारीको सामान्य भाउ बढ्नु स्वाभाविक नै हो । तर, अहिले पानी र बाढीलाई बहाना बनाएर अचाक्ली भाउ बढाइएको छ । निम्न र निम्न मध्यम परिवारलाई त तरकारी किन्न नै धौं–धौं भएको छ ।
बजारमा ह्वात्तै भाउ बढेपनि किसानले पाउने मूल्य भने उस्तै–उस्तै छ । यसले अप्राकृतिक मूल्य बृद्धिमा बिचौलियाको दादागिरी र सरकारको निरिहता प्रष्ट हुन्छ ।
तरकारीमा मात्रै होइन् फलफूलमा समेत चर्को मूल्यबृद्धि गरिएको छ । व्यापारीका अनुसार कारण उही बाढी पहिरो नै हो ।
कुन फलफूलको मूल्य कति ?
वर्षाले गर्दा केही दिन प्रभावित भएपनि पछिल्लो समय साविकअनुसार नै तरकारी भित्रिरहेको छ । किसान र उपभोक्तालाई मारमा पारेर बिचौलियाले बजार कब्जा गर्नु र सरकार रमिते बन्नुको हद यसपटक पनि पार भयो । तर, पनि दैनिक छाक टार्न उपभोक्तामा जति नै महंगो भएपनि तरकारी नकिन्नुको विकल्प छैन । तरकारीकै कारण मध्यम र निम्न मध्यम परिवार सकसमा छन् ।
थोक व्यापारीको दावीअनुसार तरकारीमा अचाक्ली भाउ बढ्नुमा दुईवटा कारण छ । पहिलो ः विषादी परीक्षणको ‘हल्ला’पछि भारतबाट कम भित्रनु । र, दोस्रो ः बाढीका कारण तराईको उत्पादन नआउनु । तर, तथ्यले भने व्यापारीको दुवै दावी गलत भन्छ ।
बढी पानी परेको दिन असार २७ गते कम भित्रिए पनि ३ दिनयता तरकारीको आयात सामान्य छ । तर, भाउ छोइनसक्नु ! काठमाडौं उपत्यकाको थोक केन्द्र कालीमाटी तरकारी बजारमा औसतमा दैनिक ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । असार २९ र ३० गते औसतभन्दा बढी र असार ३१ गते औसतभन्दा १ सय टन कम भित्रिएको छ ।
कुन दिन कति तरकारी भित्रियो ?
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिकाअनुसार पूर्वी तराईका जिल्ला, काठमाडौं आसपासका जिल्ला र भारतबाट उपत्यकामा तरकारी भित्रिन्छ । त्यसको केन्द्र कालिमाटी नै हो । तथ्यांकले साविकअनुसार नै देखाए पनि कम भित्रिएको भन्दै व्यापारी उपभोक्ताको माग धान्न नै हम्मे–हम्मे रहेको दावी गर्छन । तर, बजारमा तरकारीको अभाव भने छैन ।
कालीमाटी, बल्खु, टुकुचालगायत थोक केन्द्रबाट खरिद गरिएको तरकारीको मूल्य खुद्रा व्यापारीले ठाउँपिच्छे फरक–फरक लिँदा उपभोक्ता थप मारमा परेका हुन् । उता, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति भने असार÷साउनको समयमा हरियो तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वभाविक रहेको बताउँछ । कतिसम्मको बृद्धिलाई स्वभाविक र कतिसम्मलाई अस्वभाविक भन्ने उत्तर चाहीँ उसँग पनि छैन ।
बर्खा मौसममा उत्पादन कम हुने र त्यही मौका छोपेर किसानले उच्च मूल्य खोज्ने गरेकोले पनि तरकारी र फलफूलको मूल्य बढि हुने उपनिर्देशक श्रेष्ठको तर्क छ । तर, किसानले भने श्रेष्ठले भनेजस्तो मूल्य लिएका छैनन् । कृषि उत्पादन र कृषि क्षेत्रको नियामक निकाय कृषि मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभाग हुन् । यी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण नगर्दा तरकारीमा उपभोक्ता नराम्रोसँग ठगिएका हुन् ।
मूल्यको विश्लेषण गर्ने काम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । विभागले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छैन । विभागले छिटफुट रूपमा कालीमाटी र बल्खु बजारमा अनुगमन गरे पनि व्यवसायीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।सरकारले खुद्रा तरकारी पसलमा अनुगमनको सुरुवात नै नगरेका कारण पनि व्यापारीको मनोमानी बढ्दा उपभोक्ता संधै निरिह हुनु परिरहेको हो ।